လီလီပန်းလေးများရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ… (ဂဠုန်ဦးစောမိသားစု၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » လီလီပန်းလေးများရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ… (ဂဠုန်ဦးစောမိသားစု၏ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု)
Posted by စည်သူ အောင် on Sep 23, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues | 37 comments
7 Day ဦးစော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ကြရာတွင် အမြဲတမ်းရန်သူ၊အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေမရှိပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့ပိုစ့်လားလို့7Day မှာ ဖတ်မိထားလို့ လာကြည့်မိတာပါ။ ဒီလိုပိုစ့်ကို တင်ချင်ရင်တော့ ဖိုရမ်ထဲမှာ ၀င်တင်လိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမီဒီယာလို့လဲမပြောထားပါ၊ နောက် တင်တဲ့သူကလဲ ကိုးကားရည်ညွန်းကိုဖော်ပြပီးသားပါ၊ပီးတော့ဒီကိတ်စဟာ
ဂျာနယ် ၀ယ်မဖတ်ဖြစ်လို့ မသိလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရာကောင်းလေးတွေ ဂေဇက်မှာဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အားလုံး ဘာပဲ လုပ်လုပ် ဆင်ခြင် နိုင် ဖို့ အတွက် သင်ခန်းစာ တခု ပေါ့။
ကိုယ် လုပ်ခဲ့ တဲ့ လုပ်ရပ် ကို တစ်ယောက်တည်း ခံ စားဖို့ သာ မက လုပ်ရပ် အတိမ် အနက် ပေါ် မူတည် ပြီး
ဆိုမွေ ကောင်းမွေ မှန် သမျှ သားစဉ်မြေးဆက် ထိ သက်ရောက် တတ် တယ် ဆို တာ ကို ပါ။
ဦးစော ကမြန်မာပြည် ကို ချစ် တယ်(ဗိုလ်ချုပ် လို ပဲ မြန်မာပြည် ကို ချစ်တယ်) ဆိုတာတော့ လုံးဝ ဖြစ် နိုင်ပါ။ တကယ်သာ ချစ်ခဲ့ မဆိုလျှင် ခုလိုဘယ်လုပ်ခဲ့မလဲ။ သူမြန်မာပြည် ကိုချစ်တာ သူ့ တကိုယ်ရည် အတွက် ၊ သူအာဏာ ရဖို့ပဲနေမှာပါ။
ယခင်က ဒီ MG မှာပဲ ဖတ် ဖူး တဲ့ ဦးစော အကြောင်းမှာလဲ သူဟာ တန်ခိုးကြီး ဆင်းတုတော် တဆူကို တောင် အများဖူးမျော် ရအောင်မထားပဲ သူ့တကိုရည် အဆောင် အဖြစ်ထား တယ် ဆိုတာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ကို လုပ်ကြံ ခဲ့တယ်ဆို ထဲက သူ ဟာဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာ သိနိုင်နေပါပြီ။
သူဘာတွေပဲ လုပ်ခဲ့ လုပ်ခဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစု နဲ့တော့မပတ်သတ်ပါဘူး။
အသွင်တူအိမ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလဲ လေးစားပါတယ်ဗျာ………
ဖတ်လို့ ကောင်းလွန်းလို့ …စာရေးသူကို အမှတ်တွေပေးရင်း မျက်စိမလွဲစတမ်းဖတ်လာလိုက်တာ …အောက်ဆုံးစာသားမြင်မှ စိတ်လေသွားတော့တယ် .. ။ ဂျာနယ်တွေ မဖတ်ဖြစ်တော့ ကူးတင်တဲ့ လူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
မြင့်မြတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ထင်ဟပ်အောင် ပြထားတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ … ကြိုက်ပါတယ် … ။
သာမန်လူတွေ ထားနိုင်ခဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးပါပဲ …. ။ ကျွန်မတို့သာဆိုလျှင် မုန်းပြီဆိုကတည်းက တမျိုးလုံးတဆွေလုံး မုန်းမိမှာပါပဲ ။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားလို့ဖတ်မိတာပါ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … စည်သူအောင်သာမတင်ရင် သိမှာမဟုတ်ဘူး … သူလည်းသူများတွေ မဖတ်လိုက်ရတာကို ရွာသားတွေ ဖတ်ရပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်တော့ရှိလို့ပါ … စိတ်ဝင်စားလို့လား ကြိုက်လို့လား …. လူကြီးလူကောင်းပီသစွာ နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ မြန်မာလူမျိုးပီသခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ဟာအရမ်းလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ် .. စံပြဖြစ်ထိုက်ပြီး အားလုံးလည်း အတုယူသင့်တယ် ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ..အဲဒီစကားလေး သမိုင်းကျန်ရစ်မှာပါ…
တောင်းပန်တတ်တဲ့စိတ်… ခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်..တွေဟာ.. အင်မတန်မြင့်မြတ်ပါတယ်..။
မိသားစုဝင်များနှင့်သာမဟုတ် ဦးစောအပေါ်ကိုပင် မည်သို့မျှ သဘောမထားကြောင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆက်လက်၍ “ဖေဖေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးရင် ဦးစောကြောင့် ဖေဖေ ဆုံးသွားတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဘူး။ ပြီးတော့လည်း နိုင်ငံရေးမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်”ဟု ဆိုလေသည်။
ကိုယ်မသိလိုက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးမို့ အစအဆုံးဖတ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်
ကိုယ် မလုပ်ခဲ့လဲဘဲ အဖိုးရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ
သားစဉ်မြေးဆက်ထိ သက်ရောက် စေတာပါလားနော် ……
ဂျာနယ်တွေမဖတ်ဖြစ်လို့ အခုလိုတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်.
အမှန်းတိုင်းပြောရရင် ကျုပ်အဲ့သည်မိသားစုတွေဖက်ကနေတစ်ခါမှ မတွေးကြည့်မိခဲ့ဖူးဘူး
အထူးသဖြင့် အဲ့သည်အကြောင်းကို လုံးလုံးမတွေးကြည့်မိဖူးဘူး
လွန်လေပြီးသော သမိုင်းတွေက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မတွေ့ဖူးဘူး ခိုင်လုံတဲ့စာပေတွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့
လူမျိုးရေးတစ်ဖက်သတ် အယူဝါဒစွဲပြီး ရေးသွားတဲ့ ရှေးခေတ် အူကြောင်ကြောင်သမိုင်းစာတွေကိုဖတ်ပြီး
လူမျိုးရေးမုန်းတီးစိတ်တွေဝင်နေတဲ့ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားတွေကို ဒီပို့စ်လေးကို အခြေခံပြီး
လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှု့လျှော့ချရေး တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နားလည်မှု့တွေယူပြီး
ဟေ့ကောင် ဂျော်လကီအောင်ဘု၊ နင်တို့မွန်တွေ ငါတို့ဗမာတွေကို နှိပ်စက်ကလူ ပြုသွားတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နင်အပြောကောင်းလို့ ပြီးတော့ နင့်မှာလည်း ဗမာသွေး တဝက်ပါတယ်ဆိုလို့ သက်ညှာတဲ့အနေနဲ့ နင်ကို နှစ်ခြမ်းဖြဲ၊ ဒါမှမဟုတ် တဝက်ပိုင်းပြီး ဆုံးမရရင် ကျေနပ်ပြီ။
သူကြီးခင်ဗျာ မှတ်သားလောက်စရာ ပိုစ်တွေ.ကိုတော. ကူးယူစေချင်ပါတယ် ဆိုဒ်တစ်ခုတည်းနဲ. စုံအောင်ဖတ်စေချင်တည်း ဆန္တာတစ်ခုတည်းပါ ကူးယူလာတည်း ပိုစ်.ကိုလည်း point မပေးဘူးလို. အတည်ပြုချက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်လို.ထင်ပါတယ်ဗျာ…
စည်းကမ်းထဲ.. ပြည်တွင်းမီဒီယာ မပါပါဘူး..။
ဆိုတော့.. ဆိုင်ရာခရက်ဒစ်တိတိကျကျပေးပြီး..ကိုယ့်မှတ်ချက်ပါထည့်. ဆွေးနွေးရေးမယ်ဆို ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်..။(ဆိုင်ရာမီဒီယာက လှမ်းမကန့်ကွက်တဲ့အထိပေါ့..)
ပြည်တွင်းမီဒီယာက..၀က်ဘ်ဆိုက်တင်ထားတာကို.. ဟိုဖက်ကနေဒီဖက်.. တိုက်ရိုက်ကူးတင်နေတာမျိုးကတော့… အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး..။
ပုံနှိပ်ဂျာနယ်..သတင်းစာထဲက.. လူအများစုဖတ်သင့်တယ်ထင်တဲ့စာတွေပုံတွေ..စကန်င်လုပ်..စာပြန်ရိုက်တင်တာမျိုးကတော့.. ပိုလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျား…။
ဖတ်လိုက်ရတော့လည်း စိတ်ထဲ မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
အလင်း အခြမ်း နဲ့ အမှောင် အခြမ်း လိုပါပဲ.. လင်မရှိတဲ့ မုဆိုးမချင်းကွာတာတောင် ဘ၀ ပေး အခြေအနေ တော်တော်ကွာခြားသွားတယ်။
မိသားစု သားစဉ် မြေး ဆိုတာကြီးက တော်တော် ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းသားပဲ။
အမှန်တော့ စာရေးဆရာ တော်တယ်လို့ ပြောရမှာပဲ.. သူရေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို စာဖတ်သူတွေဆီ ဆွဲခေါ်သွားတာ သူဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေးမိတယ်။
ဖတ်ရတာ ရသတွေရော ၊အသိတရားတွေရော ၊သင်္ခန်းစာတွေရော များစွားကိုရပါတယ်။
ကျေးဇူးလဲ အရမ်းတင်ပါတယ်။ကျနော့်ဘော်ဘော်တွေကိုလည်း ဖတ်စေချင်လို့ ကျနော့်ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ခွင့်လွှတ် သဘောထားကြီး မှု ကို အထူးလေးစားမိပါတယ်….
ဦးစောရဲ့ မြေးအထိ စိတ်ထိခိုက် ရမှုကိုလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်….
ကျွန်တော် ကတော့ ခုထက်ထိ ဦးစော လုပ်ရက်တာကို မကြေနပ်သေးပါဘူး….
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း က ဘယ်လောက် ရိုးသားတယ်ဆိုတာ လုံးဝ သံသယ မ၀င်ရအောင်ကို ရှင်းပါတယ်….
ဘာမှ အထင် လွှဲစရာ မရှိဘူး….. ကိုယ်ကျိုး အရမ်းကြည့်တဲ့ ဦးနေ၀င်းတောင် ဒီလိုတော့ မလုပ်ပါဘူး….
ရူးကြောင်ကြောင် လောဘကြီးရုံမက ရက်စက်လွန်းပါတယ်…
ကျွန်တော့်ကို Heart ထိစေတာ ဒီစကားပါ။
လွတ်လပ်ရေးရပြီး နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်ခင်ကြည်အား နစ်နာကြေး တောင်းခံနိုင်ရန် တရားစွဲဆိုနိုင်သေးကြောင်း အကြံပြုသူရှိခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောခဲ့သည့်စကား
“အန်တီဒေါ်ခင်ကြည်က ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ ဒေါ်သန်းခင်က မျက်နှာမရှိဘဲ ဖြစ်ရတဲ့ မုဆိုးမ။ ကျွန်မက ဂုဏ်ရှိပြီး ကျန်ခဲ့ရတဲ့ မုဆိုးမပါ။ ဒါကြောင့် ဒေါ်သန်းခင်ဆီက ကျွန်မ ဘာမှ မယူလိုတော့ပါဘူးတဲ့။ အဘွားက အဲဒီစကားကို အခုထက် ထိမမေ့ပါဘူး” ဟုဆိုလေသည်။”
တစ်ချိန်ထဲမှာဘဲ .. တစ်ခါက ဖတ်မိလိုက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အစ်ကိုအောင်ဆန်းဦးကို အိမ်အမူနဲ့ တရားရုံးကမဆုံးဖြတ်ခင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့တော့အတော်ကွာခြားနေပါလားလို့။ စွဲဖြစ်မဖြစ်တော့ ဂျာနယ်ပုံမှန်မဖတ်တော့ မသိပါ။
ထူးဆန်းကတော့ ဘီလူးကြမ်းမှ ရတော့မယ်။ ကိုယ့်ကို ပါးရိုက်သွားတဲ့သူကို ခွင့်လွှတ်နိုင်တာနဲ့ နောင်ပါးမရိုက်အောင် တားမြစ်ပေးပါလို့ တရားရုံးဦးတိုက် လျောက်ထားတာ နှစ်ခု သက်သက်စီလေကွယ်။ သိပ်လည်း မနာလို မဖြစ်နဲကွဲ့။ ပြောင်လက်နေတဲ့ ပတ္တမြားဂူနံရံကို မနာလိုစိတ်ကြောင့် နွံနဲ့ပွတ်တိုက်မိတဲ့ ဝက်တွေလို အဟားခံနေရအုံးမယ်။
” ပြောင်လက်နေတဲ့ ပတ္တမြားဂူနံရံကို မနာလိုစိတ်ကြောင့် နွံနဲ့ပွတ်တိုက်မိတဲ့ ဝက်တွေလို အဟားခံနေရအုံးမယ် ”
Bravo ကြောင်ကြီး !!!
Dear Htoo San,
I think you don’t know/understand the real situation,
Recently, Amay Su’s house is very old, severely wear down & damaged.
It needs urgent repair works.
But, according to Si Bin Thar Yar Act,
You cannot repair your house without having permission from YCDC.
So, during Amay Su asking permission from YCDC to repair her house,
this bastard ( I mean Aung San Oo ) intentionally claimed that he partially own this property & madealaw suit against Amay Su.
Asaresult, Amay Su didn’t get permission to repair her house &
she cannot repair her house, until now.
this idiot ( I mean Aung San Oo ) is naturalized to American citizen now &
he is no longer Myanmar citizen ( he isaforeigner now ).
According to recent Myanmar laws,
this dumb ass ( I mean Aung San Oo ) has no legal right to own an unmovable property in Myanmar & he knew it.
He is barelyagreedy liar ( I mean Aung San Oo ).
Bravo Foreign Resident !!!!!
ကျုပ်တို့မှာ ဟိုဟာထောက်ရ ဒီဟာထောက်ရနဲ့ ထိန်းပြောနေမိတာ
အခုလို ဗြောင် ဆွဲဖွင့်ပြလိုက်သူရှိမှ ………………………………….
My usages were harsh,
“this bastard ( I mean Aung San Oo )”
“this idiot ( I mean Aung San Oo )”
“this dumb ass ( I mean Aung San Oo )”
“a greedy liar ( I mean Aung San Oo )”
I admitted I should not use it. :D
ကိုကြောင်ကြီးပြော သလို ဘီလူးကြမ်းခံရမယ်ဆိုတာ မတင်ခင်ကတည်းက သဘောပေါက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေမှာ အထိမခံတာ ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည်လည်းပါတယ်လေ။
မနာလိုတာမရှိသလို မလေးစားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ မနာလိုလောက်အောင် သူ့ရဲ့ခြေမူန်စာတခုလောက်တောင် စွမ်းဆောင်တာမရှိတဲ့ ကျွန်တော် နွံနဲ့ ပွတ်တာမဟုတ်သလို ကိုယ့်အတွေးကို ရိုးသားစွာ တင်ခြင်းပါ၊
ဒေါ်အောင်းဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ဥပစ်ခါ( Sorry , I’m trying to type Myanmar font and not expert yet ) ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလို့မရဘူးလား ၊ စိတ်သဘောထား၊လုပ်ရပ်ခြင်းများစွာ ကွာပေမဲ့ အစ်ကို က ဒီလိုလုပ်ရက်ပေမဲ့ မောင်နှမစိတ်မထားနိုင်တော့ဘူးလား ဆိုတဲ့ အတွေးပေါ်လို့ပါ။
ကိုသစ်မင်းပြောသလို “အမေစုကမတရားမှုကိုငုံ့မခံတဲ့သဘောလို့” ဆိုပေမဲ့ တရားပြန်စွဲမယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်အထိ သွားသင့်ရဲ့လားဆိုတာပါဘဲ။
Thanks for the info about the Foreign Resident . I have read that and agree that U Aung San Oo do not have legal right.
ကျုပ်ကတော့.. ဦးအောင်ဆန်းဦးဖက်က.. ၀င်စဉ်းစားပေးမယ်..။
မျှတသွားအောင်ပါ…။ (ထုံးစံအတိုင်း) မတူတဲ့အမြင်လေးပေါ့..။
သူ့မိဘအမွေ သူလိုချင်တာ.. တရားတယ်ထင်မိပါတယ်…။ ဥပဒေအရခွင့်ပြုမပြုကတကြောင်းပေါ့..။
အခုလည်း.ပုဂံမှာအိမ်ဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့.. မြန်မာနိုင်ငံသားများပြန်လျှောက်ထားသလားတောင် မသိတာ.။
ဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေးအရ နိမ့်ကျအောင်.. အချိန်ကိုက်လုပ်ခဲ့တာတချို့ကိုတော့.. တော်တော်အတွေးရခက်မိတယ်…။
ယူအက်စ်အစိုးရက.. သူ့ကိုဖိအားမပေးတာလည်း… တော်တော်အတွေးရခက်မိတာတခုပဲ..။
ဘာပဲပြောပြော.. ဒေါ်စုသားတွေ..(သူ့တူတွေ)ကို.. မိဘမဲ့နေကြချိန်တွေမှာ.. တနည်းတလမ်းတော့..စောင့်ရှောက်ပေးနေမယ်.. ထင်မိနေတာပဲ..။ သွေးအရင်းကိုးလေ..။
ရဲဘော်တို့ နအဖအလိုတော်ရိ သဂျီးကို ဝိုင်းအနုတ်ပေးကြစို့၊ ကျုပ် ဈေးဦးစဖွင့် လိုက်ပါတယ်။
“ဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေးအရ နိမ့်ကျအောင်.. အချိန်ကိုက်လုပ်ခဲ့တာတချို့ကိုတော့.. တော်တော်အတွေးရခက်မိတယ်…။”
Aung San Oo deliberately/intentionally did it,
so as to damage Amay Su’s image.
In fact, Aung San Oo’s wife ( Daw Le Le Nwe Thein ) control him,
( she is alsoatraveller’s tale writer ( Myitta Oo ) in one of Myanmar famous magazine, Kalyar or Mahay Thi or —– )
First thing is jealousy &
Secondly, she had attachments with military regime &
Because of that, her relatives in “Bago Division” gotalot of favors & opportunities from military regime.
I think, this story ( explanation ) was posted in
one famous Myanmar Political Web Site or Myanmar Cupid,
not very far from now.
ကန့် လန့် ကာနောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းတွေ တော့တကယ်ရှိခဲ့ မှာပါ..။
.ဒီလို ကန့် လန်ကာနောက်ကွယ်ဇာတ်လမ်းတွေ ပိုသိချင်ပါတယ်..။
ဒါမှလည်း..တဘက်အတွေးမဟုတ်ဘဲ..နှစ်ဘက်သောနားပေါ့ …
အန်တီစုရဲ့ ဒီစကားဟာလည်း..ဘစစာမျက်နှာ သမိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိပါတယ်…
နှစ်သက်မိတဲ့ စာစုတွေ..ကွင်းထဲ ပြန်ရေးပေးခဲ့ တယ်နော်..ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်…
(“ကိုယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စအတွက် ဒီလိုခံစားရတာကို စိတ်မကောင်းဘူး။ ကလေးတွေက ဘာမှ လုပ်ခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့အဘိုးကလည်း သူ့အပြစ်အတွက် ဥပဒေအရခံသွားပြီပဲ။ ကျန်တဲ့လူမှာ ဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ ဒီကလေးတွေကို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေစေချင်တယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့လည်း အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေရယ်လို့ မသတ်မှတ်သင့်ဘူး” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါသည်။)
(“တကယ်တော့ တိုင်းပြည်ကို ချစ်ကြတာချင်းတော့ အတူတူပဲနေမှာပါ” )
အတိတ်ကို သဘောထားကြီးစွာ ပြည်ဖုံးကားချ နိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားပါတယ်။ ဆိုးရွားလှတဲ့ အတိတ်ကိုသဘောထားကြီးစွာ ပြည်ဖုံးကား ချခြင်းဟာ သာယာလှပတဲ့ အနာဂတ်တခုကို ဖန်တီးစေနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနေ့ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော ခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းပါ၊ Hot News ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးပါ ပါ။
” အပြောင်းအလဲတွေဟာ ညင်သာရမယ်… ငြိမ်းချမ်းရမယ်….. သိက္ဒာ ရှိရမယ်။
ပြည်သူကို မထိရဘူး ..နိုင်ငံကို မထိရဘူး …. ဆင်းသွားတဲ့ အစိုးရကိုလည်းမထိရဘူး ..
တက်လာတဲ့ အစိုးရကိုလည်း မလိုလားအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေ မပေးရဘူး ..
အားလုံးမျှတတဲ့ အခြေခံပေါ်မှာ တည်ရှိရမယ်။”
ရေးသူ ဆရာမ ငြိမ်းငြိမ်းနိုင်ကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့။